Ny sivana AquaClear tsara indrindra ho an'ny aquarium, iza amin'ireo no hofidina? | Ny trondro
Ny sivana AquaClear dia hitovy amin'ny olona rehetra izay tao amin'ny tontolo aquarium nandritra ny fotoana kelikely, satria izy ireo dia iray amin'ireo marika malaza indrindra sy manana traikefa amin'ny fanivanana aquarium. Ny sivan-kitapon'izy ireo, antsoina koa hoe riandrano, dia sarobidy indrindra ary ampiasain'ny vondrom-piarahamonina iray manontolo.
Ao amin'ity lahatsoratra ity hiresaka momba ny sivana AquaClear amin'ny halaliny isika, hanoro ny sasany amin'ireo maodelin'izy ireo izahay, ho hitanay ny mombamomba azy ireo ary hampianarinay anao aza ny fanadiovana azy ireo. Manoro hevitra anao ihany koa izahay hamaky ity lahatsoratra mifandraika ity osmosis sivana ho an'ny Aquarium, izay rehetra tokony ho fantatrao.
1 Sivana tsara indrindra AquaClear
2 Ahoana ny fiasan'ny sivana AquaClear
3 Karazan'ireo singa fanoloana sivana AquaClear
3.1 Filtration mekanika
3.2 Sivana simika
3.3 Filtration biolojika
4 AquaClear dia marika sivana tsara ho an'ny aquariums?
5 Mitabataba ve ny sivana AquaClear?
6 Ahoana ny fanadiovana sivana AquaClear
7 Impiry ianao no tsy maintsy manova ny entana sivana?
Sivana tsara indrindra AquaClear
AquaClear System an'ny ...
AquaClear sivana fiampangana ...
AquaClear A610 - Rafitra ...
Ho hitantsika manaraka izany ny sivana tsara indrindra amin'ity marika ity. Na dia mizara ny masamihafa azy rehetra aza izy ireo ary, mazava ho azy, ny kalitao, ny fahasamihafana dia hita indrindra amin'ny litatra faran'izay betsaka azon'ny aquarium izay hametrahantsika ny sivana sy ny isan'ny litera voahodina isan'ora:
Ity sivana ity dia manasongadina ny kalitaon'ny AquaClear mahazatra rehetra, ary koa ny rafitra mangina be, ary mazava ho azy ny maody fanivanana telo, ho an'ny akondro izay tsy mihoatra ny 76 litatra. Manana taham-pivoahana izay mihoatra ny 300 litatra isan'ora. Mora be ny mivory ary zara raha misy toerana.
Amin'ity tranga ity dia momba sivana iray izay mamela ny fametrahana azy ao anaty aquarium hatramin'ny 114 litatra, ary afaka manodina mihoatra ny 500 litatra isan'ora izany. Toy ny sivana AquaClear rehetra, mangina izy ary misy sivana telo samihafa (mekanika, simika ary biolojika). Amin'ny AquaClear ny rano ao amin'ny aquarium anao dia ho madio mazava toy ny kristaly.
Ity maodely an'ny sivana AquaClear ity dia mitovy amin'ny an'ny sasany, fa kosa tokony hampiasaina amin'ny aquarium hatramin'ny 190 litatra. Afaka manodina 700 litatra isan'ora izy io. Toy ny maodely hafa, ny AquaClear 50 dia misy fifehezana mikoriana ahafahanao mampihena ny fikorianan'ny rano.
Ary mifarana amin'ny ny maodely lehibe indrindra amin'ny sivana an'ity marika ity, izay azo ampiasaina tsy mihoatra ny kely noho ny any amin'ny aquarium hatramin'ny 265 litatra. Ity sivana ity koa dia afaka manodin-drà mihoatra ny arivo litatra isan'ora. Izy io dia lehibe kokoa noho ny hafa, izay manome antoka ny hery tsy mampino (hany ka misy ny fanehoan-kevitra sasany milaza fa nampifanarahiny tamin'ny kely indrindra).
Ahoana ny fiasan'ny sivana AquaClear
Ny sivana AquaClear no fantatra amin'ny hoe sivana kitapo. Ireo karazana sivana ireo dia mety indrindra ho an'ny aquarium kely sy salantsalany. Izy ireo dia "mihantona" ivelan'ny tanky, amin'ny iray amin'ireo sisiny ambony (ka io no anarany), noho izany dia tsy maka toerana ao anaty aquarium izy ireo ary koa, tsy dia lehibe loatra toy ny sivana ivelany natao ho an'ny akondro lehibe kokoa izy ireo. Ho fanampin'izany, mandatsaka ny rano amin'ny karazana riandrano izy ireo, izay manatsara ny fitrandrahana azy io.
Ny sivana AquaClear dia miasa toy ny ankamaroan'ny sivana amin'ity karazana ity:
voalohany, miditra amin'ny fantsona plastika ny rano ary miditra amin'ny sivana.
avy eo ny fitaovana dia manatanteraka sivana hatrany ambany ka hatrany ambony ary ny rano dia mandalo sivana telo samihafa (mekanika, simika ary biolojika, izay horesahintsika avy eo).
Vantany vao vita ny sivana, latsaka indray ny rano tao anaty aquarium, amin'ity indray mitoraka ity madio sy tsy misy loto.
Ny zavatra mahaliana momba ny sivana amin'ity marika tsara ity dia ampidirin'izy ireo, ankoatry ny sivana telo samihafa, a fifehezana mikoriana ahafahanao mampihena ny fikorianan'ny rano hatramin'ny 66% (ohatra, rehefa mamahana ny hazandranoo). Ny motera sivana dia tsy mijanona miasa na oviana na oviana, ary na dia mihena aza ny fikorianany dia tsy hihena koa ny kalitaon'ny rano voasivana.
Karazan'ireo singa fanoloana sivana AquaClear
Araka ny efa nolazainay teo aloha, Ny sivana AquaClear dia manana rafitra sivana telo hanala ny loto rehetra ny rano ary avelao hadio araka izay azo atao.
Izany no ny filtration voalohany izay manomboka rehefa mandeha ny sivana, ka voafandrika ireo loto lehibe indrindra (toy ny sisa tavela amin'ny kotroka, sakafo, fasika mihantona ...). Noho ny sivana mekanika, ny rano dia tsy mijanona ho madio fotsiny, fa tonga amin'ny filtration biolojika amin'ny fomba mety indrindra, ny sivana sarotra indrindra sy marefo amin'ireo telo ireo. Amin'ny tranga AquaClear, ity sivana ity dia vita amin'ny foam, ny fomba tsara indrindra hisamborana ireto residues ireto.
Eo ambonin'ilay sombin-drongony izay mahavita filtration mekanika no ahitantsika ny sivana simika, misy karbonina mihetsika. Ny ataon'ity rafitry ny sivana ity dia ny manafoana ireo sombin-javatra bitika kely levona ao anaty rano izay tsy vitan'ny sivana mekanika. Ohatra, tena ilaina izany rehefa te hanadio ny rano ianao aorian'ny fitsaboana ny hazandranoo, satria hanala ireo fanafody sisa tavela. Izy io koa dia manala ny fofona. Ity sivana ity dia tsy tokony hasaina hampiasaina ao amin'ny aquarium aquarium.
AquaClear mamaly ...
Farany tonga amin'ny filtration marefo indrindra isika, ilay biolojika. Ary ny bakteria miaina ao amin'ny Biomax, ny fantsom-bakoly izay ampiasain'ny AquaClear amin'ity sivana ity, no tompon'andraikitra amin'ity filtration ity. Ny bakteria izay mijanona ao anaty canutillos dia tompon'andraikitra amin'ny famadihana ireo sombintsombiny tonga any aminy (ohatra, manomboka amin'ny zavamaniry mihasimba) ho lasa singa tsy misy poizina mba hitazomana ny aquarium ho salama tsara sy hahafaly ny trondroo. Ankoatr'izay, ny filtration biolojika izay atolotry ny AquaClear anao dia manana tombony fa azo ampiasaina amin'ny aquarium aquarium sy rano madio.
AquaClear dia marika sivana tsara ho an'ny aquariums?
AquaClear dia tsy isalasalana fa marika tena tsara ho an'ny vao manomboka sy ny manam-pahaizana eo amin'ny tontolon'ny aquariums. Tsy hoe satria marika manana tantara be dia be izy ireo ary misy ihany koa amin'ny toerana maro (na an-tserasera na amin'ny fivarotana biby, ohatra) fa noho ny hevitra miroborobo amin'ny internet dia manana teboka maro ao mahazatra: fa izy ireo dia marika mahazatra, miaraka amin'ny sivana fananganana traikefa be dia be, izay manana kalitao avo indrindra ary mitandrina be dia be amin'ny vokatra vokariny.
Mitabataba ve ny sivana AquaClear?
Ny sivana AquaClear dia malaza amin'ny fahanginany. Na izany aza, mahazatra azy ireo ny maneno mandritra ny andro voalohany ampiasaina, satria mbola mila maka sary izy ireo.
Tetika iray mba tsy ho feony loatra dia ny fanandramana fa ny sivana tsy mijanona eo amin'ny veran'ny aquarium, satria matetika io fifandraisana io no miteraka fikororohana sy tabataba, izay mety hanjary hanelingelina. Mba hanaovana izany dia atokàny ny sivana amin'ny vera, ohatra, amin'ny fametrahana peratra fingotra. Zava-dehibe koa ny toerana misy ny sivana mba tsy hitabataba be loatra, tsy maintsy mahitsy tanteraka.
Farany, raha mitohy mitabataba be izy dia atoro anao hizaha raha misy izany ny sisa tavela (toy ny grit na potipoti-javatra) dia tavela teo anelanelan'ny turbine sy ny motera.
Ahoana ny fanadiovana sivana AquaClear
Sivana AquaClear, toy ny sivana rehetra, tokony diovina indraindray. Na dia impiry ianao no mila manao azy dia miankina amin'ny aquarium tsirairay sy ny fahaizany, dia ho fantatrao matetika fa tonga ny fotoana fanadiovana rehefa manomboka mihena ny fivoahan'ny fivoahana (matetika isaky ny tapa-bolana) noho ny fako izay miangona.
Voalohany indrindra dia mila esory ny sivana mba tsy hahazo spark tsy ampoizina na ratsy kokoa.
avy eo esory ny singa sivana (ny motera karbonika, ny fantsom-bakoly ary ny spaonjy fanivanana). Raha ny marina, AquaClear dia efa mirakitra harona ahazoana aina izay tsy tokony haharitra mihoatra ny dimy minitra ny fanadiovana ny zava-drehetra.
Mametraha sasany rano anaty rano ao anaty koveta.
Zava-dehibe tokoa ny fampiasanao ny rano aquarium diovy ny spaonjy sy ny singa hafa sivana Raha tsy izany, raha mampiasa rano amin'ny paompy ohatra ianao, dia mety voaloto ireo ary hijanona tsy hiasa ny sivana.
Ilaina ihany koa ny famerenanao azy io indray apetraho amin'ny toerana marina ny zava-drehetraRaha tsy izany dia tsy hikatona tsara ny sarony, ka tsy hiasa tsara intsony ny sivana.
Farany, aza asiana tsofina ao anaty sivana ary aolory mainaRaha tsy izany dia misy loza ateraky ny hafanana be sy ny handoro azy.
Impiry ianao no tsy maintsy manova ny entana sivana?
ara-dalàna, ny enta-mavesatra dia tsy maintsy ovaina indraindray mba hanohy hanao ny asany amin'ny fomba marina ny sivana, raha tsy izany ny habetsaky ny fako manangona dia mety hisy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny filtrate sy ny fikorianan'ny rano. Na dia, toy ny mahazatra aza, miankina betsaka amin'ny fahaizan'ny aquarium izy io, ny mahazatra indrindra dia:
Ovao ny sponjy isaky ny roa taona na mihoatra, na rehefa miraikitra sy vaky.
Ovay ny sivana karbaona navitrika indray mandeha isam-bolana eo ho eo.
ny grommet vita amin'ny seramika amin'ny ankapobeny dia tsy mila ovaina izy ireo. Arakaraka ny itomboan'ny zanaky ny bakteria no hanatsarany ny asany amin'ny sivana!
Ny sivana AquaClear dia vahaolana kalitao amin'ny fanivanana ny aquarium anao na ho an'ny zaza vao teraka eto amin'ity tontolo ity na ho an'ny manam-pahaizana, ary koa ho an'ireo izay manana Aquarium amin'ny refy maotina na ireo izay afaka mifaninana amin'ny ranomasina. Lazao aminay, inona ny sivana azonao ampiasaina ao amin'ny aquarium anao? Mampirisika ny sasany ve ianao? Inona no zavatra niainanao tamin'ity marika ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny trondro » Accessories » Sivana AquaClear